Kooxda Real Madrid oo ka soo jawaabtay dalabkii ay Manchester United ka gudbisay Raphael Varane… (Miyaa la soo diiday?) – Gool FM
Haaruun June 18, 2021
(Madrid) 18 Juun 2021. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ee ka dhisan caasimadda Spain ayaa ka soo jawaabtay dalabkii ay Manchester United ka dubisay xiddigeeda Raphael Varane.
Shabakadda Manchester Evening News ayaa warinaysa in Kooxda Manchester United laga soo diiday dalab ku kacayey 50 milyan oo gini oo u dhigta 58 milyan euro ama 70 milyan oo dollar oo ay ku dalbatay daafaca dhexe ee Real Madrid Raphael Varane.
Inkastoo ay Los Blancos soo diiday dalabkaas ku kacay 50-ka milyan ee gini oo ay Man Utd ka soo gudbisay Varane, haddana waxaa la warinayaa inay markale isku dayi doonto Red Devils saxiixa daafacan iyadoo horumarin ku samaynaysa dalabkaas sida warbixinta lagu sheegay.
Red Devils ayaa la sheegay inay ka dhigtay Raphael Varane bartilmaameedkeeda ugu sarreeya ee daafaca, laakiin Real Madrid ayaa ku doonaysa lacag dhan 80 milyan oo gini oo u dhiganta 94 oo euro ama 111 milyan oo dollar.
Pele: "Waxaan doonayaa in Neymar uu jabiyo rikoorkeyga xulka Brazil"